10/10/2018 - Page 2 sur 4 -
JMJ Mahajanga : Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy
Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy omaly ny andro iraisam-pirenena ho an’ny tanora, na ny Jmj andiany faha-9, izay tanterahina any Mahajanga. Tanora maherin’ny 25 000 no hifamotaona amin’ny Village touristique, izay toerana hanatanterahana izany. Ho an’ny …Tohiny
Dinan’ny kandidà : Niampy enina ireo nanao sonia
Niampy kandidà enina indray ny nanao sonia ny dinam-pitsipi-pitondrantenan’ireo kandidà, taorian’ny fanatanterahana izany tamin’ ny fomba ofisialy ny faha- 3 ny volana oktobra lasa teo. Raha tsiahivina dia enina ihany ireo kandidà nanaiky nanao sonia …Tohiny
Lalam-pirenena faha-4 : Manararaotra ny mpanakan-dalana
Olona iray maty voatifitry ny jiolahy, mpandraharaha iray nalaina an-keriny tao anaty fiara nandritry ny fitohanana. Fotoana maha-be olona eo Mahatsinjo izao, ka manararaotra ny mpanakan-dalana. Nijanona teny an-toerana avokoa ny fiarakodia nitondra ireo mpizaika …Tohiny
Andro iraisam-pirenena ho an’ny ankizivavy : Ho marihina amin’ny fanatanjahantena
Rahampitso 11 oktobra no fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny ankizivavy, ary mankalaza izany koa isika eto Madagasikara, izay tanterahina eny amin’ny kianjan’Alarobia. Ho an’ny eto amintsika, marihina amin’ny alalan’ny fanatanjahantena izany andro izany, izay …Tohiny